Welcome to Aayaha Nolosha » Raac qofka ku jecel halkii aad dooran lahayd mid aan ku rabin.
Raac qofka ku jecel halkii aad dooran lahayd mid aan ku rabin.
February 10, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Dareenka Jacaylka ee uu qofku la wadaago mid kale ayaa ah mid badanaaba ku yimaada aragti ka bogasho leh, oo ay indhuhu qabtaan qofka la jeclaanayo, markaa oo qofka la jantay uu albaabada qalbiga si xoog isaga furo, kadibna uu isku xiro.
Inkasta oo aan si dhab ah loo maamuli karin..Hawlaha la xiriira Dareenka Caashaqa ee Qalbiga Qofka, haddana nafta oo aad talo mihiim ah la wadaagto, waxaa ka imaan kara arin la isku aqbalo..
Jacaylka lama diidana, naftana in la xayiro oo rabitaankeeda laga horyimaado, ma aha, balse in aad adiga iyo naftaada isku waafaqdaan qofka ay Jeclaanayso, in uu yahay mid Nolol lala wadaagi karo, waayo qofka ku jecel ma aha mid wax kaa halayn, waxaase suuragal ah haddii aad doorato mid aan ku rabin oo aad adigubJeceshahay in uusan dan ka lahayn Noloshaada iyo Geeridaada, Taasina ay noqon karto mid halis galin karta Naftaada.
Jeceylku waa dareen aad u macaan oo mararka qaar aan dhihi karno waa daawo lagu bogsado, waana kolka aad si weyn isula wadaagtaan qof aad si dhab ah isu jeceshihiin,Waxaase geeri iyo khatar ku soo wajahdey oo dhimasho ka imaan kartaa marka aaad raacdo qof aan ku Jeclayn.
Kalgacalku waa midka Nolosha u horseeda farxada iyo Bashaashnimada qofka ka dhigta mid ay bulshadu ka hesho, Xubiga ayaa ah mid xiriir macaan la leh qalbi wanaaga iyo in uu qofku qaado Kalsooni Shaqsiyadeed, waa marka lamaanuhu yihiin kuwo iscalmaday.
Jacaylka oo lagu guuldaraysto ayaa mararka qaar keena halis nafeed oo ku gayn karta iilka iyo Geerida.
Inkasta oo uu Jacaylku uu dhib badan yahay, haddii aan lagula wadin, haddana waxaad kaga gudbi kartaa, adiga oo talada idin dhexmarta Naftaada aad isku waafaqdaan,maadama uusan guri samo ku dajinayn qof aan ku Jeclayn. Taas badalkeedana aad nafta ku riixdo in ay xulato qof ku jecel oo la hubo in uu dhib kuu quureynin.
Sidaa darteed raac qof ku jecel intii aad dooran lahayd qof aan ku rabin.